यिनलाई पनि जेल हाल्ने कि ? – Nepal Reports
यिनलाई पनि जेल हाल्ने कि ?
लोक गायक कुमार बस्नेत भिटेन भन्दा कम्ता छैनन् । कुमार बस्नेतले भिटेनलेभन्दा कडा दिएका छन् । सरकारले बस्नेतका गीत सुनेको छैन र ?
Blog By Rohan Dulal
- लाली जोवन सुम्पिएर आफै अघि सर्दा
- शीरमा लाउने शीरै फूल हातमा लाउने बाला
कोमल वलीले तीजजस्तो हिन्दुको पवित्र पर्वमा डिस्कोमा नाचौँ भनेकी छिन् । डिस्कोमा पक्कै पनि दूध खाने प्रचलन छैन होला, रक्सी नै खाएर नाचिन्छ होला । के अब संस्कृतिको जगेर्नाका लागि गायकहरुलाई समाउँदै युट्युबबाट गीतहरु हटाउने हो भने गायिका एवं सांसदको तक्मा भिरेकी कोमल वलीको गीत युट्युबमा राखिरहन मिल्ला त सरकार ?कुमार बस्नेतलाई के गर्ने ?
- पल्लोघरे ठूले झ्यालढोका थुन्
- डल्ली मगर्नी हो सुन मयाँ
बोल्न मन लाग्दैन हो पीर पर्‍यासीअहिले बद्री पंगेनी लोक दोहरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष छन् । उनका गीतले पनि समाजलाई पक्कै विकृत बनाएको हुनुपर्छ । उनले ‘ससुरालीमा’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको दशक बढी भयो । त्यही गीतबाट बद्री पंगेनी र सिन्धु मल्ल नेपाली सांगीतिक आकाशमा स्थापित भएका थिए । तर, उनको गीतले त यस्तो पो भन्छ-
- ससुराली गैरहन्थेँ दिनका दिन
-घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै साली माग्ने गीत गाउने बद्री पंगेनीलाई चाँहि पक्राउ नगर्ने सरकार ? कानुनले एकभन्दा बढी बिहे गर्न नपाउने भनेको छ ।धर्मेन्द्र सेवानको गीतले त अझै समाजमा विग्रह नै ल्यायो होला । उनले गीतको अन्तरामा भनेका छन्
नाठो पोइलाई रोटी…।’हेर्नुस् त प्रकाश सपुत र पि्रति आलेको ब्याटल- टू कस्तो छ :
छर्नेले बिउ नछरेसी फल कसरी लाग्थ्यो ?कविता गजल उस्तै छन्, स्ट्यान्डअप कमेडी… । के अब सरकारले यी सबको मुखमा बुझो लगाउने ?
जसरी पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’लाई हटाइएको थियो, त्यसरी नै ठेगान लगाउने कि ? जीवन शर्माको गीतलाई फेरि किन बज्न दिने ? उनलाई पनि जेल हाल्ने कि ? उनले त ‘देशै जान थाल्यो टुक्रा-टुक्रा गरेर…’ भन्दै संघीयताविरोधी गीत गाएका छन् ।